uxinzelelo lwe-clamp, abaxhasi be-clamp abaXhasi kunye neFektri-China ubunzima be-clamp, abaXhasi beTension abavelisi
H uhlobo ucinezelo uqinisa
ubunzima uqinisa, Tension uqinisa
Ukubambelela komntu obambeleyo ngesibambiso sokuphela
Ezinye izixhobo zekhebula
Intambo igqunyiwe lug
PA1500 Plastic tension uqinisa Material Umzimba uqinisa yenziwe yemozulu kunye UV ukumelana Polymer kunye Polymer wedge engundoqo. Intonga yokuqhagamshela ehlengahlengiswayo eyenziwe ngentsimbi eshushu eshushu (i-FA) okanye i-stainless steel (SS). Umbala omnyama Isithuba esifutshane <100 m, okanye kuxhomekeke kwinkqubo yomgca
Umzimba we-Clamp owenziwe ngemozulu kunye nokuxhathisa kwe-UV Polymer okanye umzimba wealuminium ingxubevange.
Ikhonkco elinokuhlengahlengiswa elenziwe ngesinyithi esishushu sentsimbi (FA) okanye ngentsimbi engenanto (SS).
Isibini semakhonkco sibamba intambo ngokuzenzekelayo ngaphakathi komzimba odibeneyo.
Ukufakwa akufuneki nasiphi na isixhobo esithile kwaye ixesha lokusebenza lincitshiswe kakhulu.
◆ Amandla aphezulu e-aluminium alloy, inylon kunye neglasi yefayibha, intsimbi engenasici
◆ Umzimba we-Clamp owenziwe ngemozulu kunye nokuxhathisa kwe-UV Polymer okanye umzimba wealuminium ingxubevange.
◆ Ikhonkco elinokuhlengahlengiswa elenziwe ngesinyithi esishushu sentsimbi (FA) okanye ngentsimbi engenanto (SS).
Iimpawu zibonakaliswa ngozinzo oluphezulu loomatshini, ukunciphisa ubukhulu bokuphathwa ngokulula, ukumelana okuphezulu koomatshini kunye nemozulu. Isixhobo sokubamba iintambo kwinto yokwambathisa iqinisekisa ukufakwa kabini kwisiseko esingathathi hlangothi kunye nomonakalo weengcebiso esingxotyeni, iindawo ezikhuselekileyo, akukho zixhobo zifunekayo. Ibheyile yentsimbi engenasici enemabhile amabini acinezelweyo ekugqibeleni, uqhagamshelo lwabo luvumela ukuvaleka ngokulula emzimbeni wenkampu.
◆ Isixhobo simahla sokufaka kunye neesuntsu ezishenxisa ngaphakathi komzimba
◆ Kulula ukuvula iimvume zebheyile ezifakwe kwizibiyeli kunye neehagu zeebhegi Ubude obulungelelanisiweyo bebheyile kumanyathelo amathathu.
Isixhobo simahla sokufaka kunye neesuntsu ezishenxisa ngaphakathi komzimba
Kulula ukuvula imvume yebheyile elungiselelwe kwizibiyeli kunye neehagu zeebhegi Ubude obulungelelanisiweyo bebheyile kumanyathelo amathathu.
Kulula ukuvula imvume yebheyile elungiswa kwizibiyeli kunye neehagu.
Ukulungiswa kwexesha lebheyile kumanyathelo amathathu.
Inkampani ipasile ukuqinisekiswa komgangatho, okusingqongileyo kunye nenkqubo yolawulo yempilo nokhuseleko, kwaye yaphumelela igama elihle kwishishini elinye kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo kunye negama elihle.
Lwedilesi: No268, Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang kwiPhondo, China
Ifeksi: 0086- (0) 577-62698355